Nagarik News - अक्सिजनभन्दा जरुरी पैसा
अक्सिजनभन्दा जरुरी पैसा
शुक्रबार २४ जेष्ठ, २०७०
नेतादेखि समाजसेवीसम्मका सपना–जपना पैसा हुने देश हो यो। महाकवि लक्ष्मीप्रसाद देवकोटाको पैसालाई हातको मैला ठान्ने विचार मनन गर्ने फुर्सद कसलाई छ र? 'फास्ट एन्ड फरवार्ड' तन्नेरी पुस्ता पैसाका लागि पनि उत्तिकै बेचैन छ। उसका लागि पैसा अक्सिजनभन्दा अनिवार्य चिज भइसक्यो। त्यसैले १७ वर्षकी किशोरी आफ्ना रुचि र सोखका निम्ति पैसा जुटाइदिने ६० वर्षीय वृद्धलाई ब्वाईफ्रेन्ड बनाउँछे। स्कुले केटो बाबुको खल्तीमा लामो हात गर्छ। यसपटक तन्नेरी पुस्ताको पैसाप्रेम बुझ्न खोजेकी छिन् सजना बरालले।
'केका लागि पैसा चाहिन्छ तपाईंलाई?'
'केका लागि चाहिँदैन त्यो भन्नू न,' काठमाडौँ, महाराजगञ्जस्थित हेराल्ड कलेजको कक्षा ११ मा पढ्ने अमित ढकाल संवाददातासँग जंगिए, 'संसारै पैसाले चलेको छ। खान बस्न, सुत्न र उठ्नदेखि पिसाब फेर्नसमेत पैसा चाहिन्छ। पैसाबिना के हुन्छ? बरु अक्सिजन नभए बाँच्न सकिएला, पैसाबिना बाँच्न असम्भव छ।'
बाँच्नका लागि चाहिने आधारभूत चिजमध्ये पैसा पनि एक हो। यो सत्य हो। तर, अहिलेको पुस्ताले पैसालाई भगवान् नै ठान्न थालेको छ। पैसाबिना संसारै परचक्री हुने र भीडमा पनि एक्लो भइने धेरैको तर्क छ। उनीहरू एककाइसौँ शताब्दीलाई पैसाको शताब्दी, एज अफ मनी भन्न रुचाउँछन्। 'जता जाऔँ, जे गरौँ, जे भनौँ, सबैथोकको मूल्य तिर्नुपर्छ,' ठमेलस्थित हिब्रू टुर्समा कार्यरत २१ वर्षीय सविन चित्रकारले 'मान्छे त पैसाको खैलौना न हो।'
संसार जति–जति आधुनिक हुँदै छ, नयाँ पुस्ता उति नै बिलासी बन्दै छ। प्रविधि र सञ्चारले उनीहरूका इच्छा र चाहनालाई थप तीव्र बनाइदिएका छन्। घुमघाम, सपिङ, डेटिङ, फिल्म हल, क्लब, नेट सर्फिङ, जमघट र खानपिन अहिलेका केटाकेटीका रुचि र आवश्यकता दुवै हुन्। आवश्यकताको सूचिमा मोबाइल र बाइक छुट्ने कुरै भएनन्। यी सबै चिजबिजको उपभोग गर्न पैसा चाहियो।
यसरी पैसा नै सबथोक हो भन्ने शिक्षा ग्रहण गरेको पुस्ताले पैसा कमाउने अनेक उपाय पनि पत्ता लगाएको छ। कोही एसएलसी परीक्षा दिनासाथ जागिरको खोजीमा भौँतारिन्छन् भने कोही ऋण काढ्नसमेत पछि पर्दैनन्। पैसावाल पार्टनर खोज्नेदेखि बाउको खल्तीमा लामो हात गर्नेसम्मका हर्कत उनीहरूका लागि सामान्य भइसक्यो।
भक्तपुर, चांगुनारायणस्थित नेपाल इन्जिनियरिङ कलेजका सुशील गौतमको दैनिक खर्च कम्तीमा १५० रुपैयाँ हो। 'पेट्रोल र क्यान्टिनले सबै पैसा चिलिम पार्छन्,' उनले भने, 'साथीभाइसँग घुम्न जानुपर्‍यो भने ममी, ड्याडी र दाइलाई एक्लाएक्लै भेटेर खुसुक्क माग्नुपर्छ। सबै जनासँग मागेपछि धेरै पैसा जम्मा हुन्छ। त्यसपछि ढुक्कले घुम्न गइन्छ।' बानेश्वरकी १८ वर्षीया आयुषा चाहिँ डान्स पार्टी भनेपछि मनै थाम्न सक्दिनन्। तर, डिस्को/क्लब जान उनलाई अभिभावकले खर्च जुटाइदिने कुरै भएन। उनी कहिले कापी, कहिले किताब त कहिले प्य्राक्टिस–बुक किन्नुपर्‍यो भन्दै आमासँग पैसा माग्छिन्। त्यतिले नपुगे दिदीको खुत्रुकेभित्र कपाल च्याप्ने चिम्टी छिराएर हजार–पाँच सय रुपैयाँ चिप्ल्याउँछिन्। 'सबै साथीहरू गएपछि आफूलाई पनि जाउँ्कजाउँ्क लागिहाल्छ,' उनले पैसाका लागि दुई नम्बर अपनाउनुको कारण सुनाइन्, 'मम–ड्याड वा दाइ–दिदीको पैसा भन्नु र मेरो पैसा भन्नु आखिर एउटै कुरा हो। फेरि, माग्दा नदिएपछि आइडिया त लगाउनैपर्‍यो नि। '
अधिकांश युवायुवती आफ्ना सोख पूरा गर्न पैसा खर्चिन्छन्। केटा र केटीको खर्च गर्ने क्षेत्र भने बेग्लाबेग्लै हुन्छ। काठमाडौँ, गोंगबुकी २० वर्षीया पुष्पा बस्नेतको दिनमा दुई सय रुपैयाँको हाराहारीमा खर्च हुन्छ। 'स्याम्पू, स्यानिटरी आइटम, कस्मेटिक्स र चकलेटले धेरै पैसा सिध्याउँछन्,' उनले खर्च विवरण सुनाइन्, 'घरमा तरकारी किन्ने जिम्मा मेरो छ। त्यसबाट उबे्रको पैसा मै राख्छु। दिदीले एक्स्ट्रा पकेट मनी पनि दिन्छे।' पुरुषको हकमा भने धेरैजसो रकम चुरोट, चिया, जमघट, गेम–हाउस वा डेटिङमा सकिन्छ। 'क्याफे गयो, गर्लफ्रेन्डलाई बिल तिर् भन्नुभएन,' नेपालटार क्याम्पसका सुरेश उपाध्यायले मर्का पोखे, 'कलेज गयो केटाहरूले क्यान्टिन लगिहाल्छन्। छानी–छानी खाजा भकुरेपछि पैसा त होम हाल्दा फ्याँक्ने चामलसरह हुन्छ।'
सवारी साधन भएका केटाकेटीलाई पैसाको महŒव र अभावबारे अझ बढी जानकारी हुन्छ। पेट्रोल र सर्भिसिङका लागि उनीहरूले अभिभावकको 'कान खाइरहनु' पर्छ। 'एक लिटर तेलको एक सय २५ रुपियाँ पर्छ,' बसुन्धरास्थित साउथ वेस्टर्न स्टेट कलेजकी सुप्रिया श्रेष्ठले भनिन्, 'दुई–तीन लिटर हाल्नैपर्‍यो। टाढा कतै जानुछ भने ट्यांकी फुल गर्नैपर्छ। बल्लतल्ल स्कुटर किनिमागेकी थिएँ। अब पेट्रोल हाल्ने पैसा माग्दा–माग्दा आफैँलाई दिक्क लागिसक्यो।'
एक रक ब्यान्डका ड्रमर हिमाल थकालीलाई भने बाइकले पेट्रोलको टेन्सन होइन, बरु आर्जनको बाटो खुलाएको छ। 'केटाहरू कसैको बाइक छैन,' उनले छाती फुलाउँदै भने, 'सबैजना मेरै भिआर चढेर गर्लफ्रेन्ड भेट्न जान्छन्। पेट्रोल पनि उनीहरूले नै हाल्दिन्छन्। कहिलेकाहीँ तेल हाल्नुपर्‍यो भनेर दुईचार जनासँग छसात सय रुपैयाँ उठाइन्छ। तेलको पैसा तिर्ने बेला अर्कोलाई लिएर गयो, उसैलाई तिरायो। मागेको पैसा चोख्खै बच्छ। आफूलाई त फाइदै–फाइदा!'
पैसाका लागि जुक्ति फुराउनुपर्ने बाध्यता विशेषतः मध्यम र निम्न वर्गीय परिवारका सन्ततिलाई हुने गरेको छ। धनाढ्य परिवारका छोराछोरीको जीवनस्तरबाट प्रभावित भई उनीहरू सिको गर्न खोज्छन्। उनीहरूले झैँ मोजमस्ती गर्न पैसाको जोहो गर्छन्। र, पेटमा मुसा नाचे पनि क्लबमा कम्मर मर्काउन थाल्छन्। कतिपय केटाकेटी चाहिँ जक्सनमा गएर चुरोट र चिया खाँदै गफ चुट्न पाए अर्थोक केही चाहिँदैनझैँ गर्छन्। 'मेरो त स्नुकर, पुलहाउस वा भिडियो गेम पार्लरमै दिन बित्छ,' सामाखुसी, कपुरधाराको भिडियो गेम पार्लरमा भेटिएका भूपेन्द्र खड्काले आङ तान्दै भने, 'आमासँग पैसा माग्यो। नदिए पसल (आमाको लुगा पसल) बाट अलिअलि झ्याप हान्यो, यहाँ आयो, खेल्यो। यस्तै छ जिन्दगी।'
देखासिकीका कारण घाँटी हेरेर हाड निल्ने उखान बिर्सिनेमा स्कुले केटाकेटी पनि पर्छन्। नर्सरी क्लासदेखि नै गर्लफ्रेन्ड र ब्वाईफ्रेन्डको चर्चा चल्ने जमाना हो यो। नौदश कक्षाका केटाहरू चुरोट तान्न थाल्छन्। र, केटीहरूलाई आई–ब्रो उखेल्न उमेरको कुनै हदबन्दी छैन। तेह्र–चौध वर्षमै आँखीभौँ उखेल्न, कपाल छोट्याउनदेखि फाउन्डेसन दल्नसम्म भ्याइसक्छन्। यी सबै कुराको सम्बन्ध पैसासँग गाँसिएको छ। ब्युटिपार्लर जानेलाई प–पन्ध्र दिनमा पैसा चाहिन्छ। चुरोट, खैनी खानेलाई दिनदिनै चाहियो! पार्टनर बनाएकालाई डेटिङ जान हप्तैपिच्छे रकम जुटाउनुपर्छ। तर, पैसाका लागि सधैँभरि बा–आमालाई अन्तरवार्ता दिन केटाकेटीहरूलाई झ्याउ लाग्छ। त्यसो भए गर्ने के त? उत्तर– सर्ट कट अपनाउने।
'अस्ति भर्खरको कुरा हो,' लिंकन कलेजकी सपना लामिछानेले एउटा किस्सा सुनाइन्, 'मेरो मामाकी छोरी (ऋचा) ले माइजूको १७ हजार रुपैयाँ पर्ने मोबाइल झ्याप हानेर बसुन्धराको एउटा पसलेलाई पाँच हजारमा बेचिछन्। मोबाइल हरायो भनेर माइजूको हंसै उडेको थियो रे। तर, हराएको दुईचार दिनपछि माइजूलाई छोरीमाथि नै शंका लागेछ। ऋचा कहिले नयाँ जुत्ता, कहिले वान–पिस डे्रस त कहिले थरीथरीका टिसर्ट घर ल्याउन थालिछन्। साथीले दिएको भन्दै स्कुलबाट आउँदा उनी एकुन्टा नयाँ सामग्री ल्याउँथिन् रे। एकदिन त उनले कपालै स्टे्रट गरेर आइछन्। स्कुल गएकी छोरी कपाल फिजाउँदै साँझ घर आएपछि माइजूको पारो तातेछ। उहाँले ऋचालाई घिच्याउँदै स्कुल लग्नुभएछ। स्कुलमा त उनी एक हप्तादेखि एब्सेन्ट देखिइन्। मोबाइल बेचेको पैसाले दिनभरि मस्ती गर्दै हिँडेको पत्तो लागेको थियो।'
कलेजकालाई भन्दा नौ, दश कक्षामा पढ्ने स्कुले–विद्यार्थीलाई पैसाको बढी अभाव हुन्छ। 'दिनभरि स्कुल जानेलाई किन चाहियो पैसो?' भन्दै अभिभावक सुको झार्दैनन्। फिल्म हेर्न जाने वा स्कुल बंक हान्ने प्लान बनाएकाहरूलाई त फसादै पर्छ। अन्ततः उनीहरू पैसा कमाउन छोटो बाटो रोज्छन्, जुन खतरनाक पनि हुन सक्छ। 'एकदिन मलाई त्यस्तै टेन्सन भा'थ्यो,' कक्षा ९ मा पढ्ने शीताष्माले भनिन्, 'भ्यालेन्टाइन्स डे थियो। मैले ब्वाईफ्रेन्डलाई टि्रट दिन्छु भनेर एन्डिज क्याफेमा बोलाएकी थिएँ। ममीलाई डिस्ट्रिक्ट लेभल एक्जामको फर्म भर्न दुई हजार रुपैयाँ चाहिन्छ भनेकी थिएँ। दिनुहुन्छ भनेर ढुक्कै थिएँ। तर, बूढीले खाजा खा भनेर २५ रुपियाँ पो दिइन्! फर्म भोलि भर्नू भनिन्! म त खङरङ्ङै परेकी थिएँ।' शीताष्माले त्यतिबेला आफूलाई भाउ दिइरहेको अर्को केटासँग आमा बिरामी भएकाले तुरुन्तै हस्पिटल जानुपर्‍यो भनेर २५ सय रुपैयाँ उम्काइछन्। र, त्यही पैसाले ब्वाईफ्रेन्डसँग एन्डिजमा उत्सव मनाएको बताइन्।
प्रेमका लागि गरिने त्याग र तपस्या 'उहिलेका कुरा खुइले' भइसकेका छन्। तपस्याको ठाउँ 'गाँठ'ले लिएको छ। पैसाका लागि प्रेम र प्रेमका लागि पैसा– दुवै हिजोआजका चल्तीका भनाइ हुन्। कतिले माया पाउन पैसाको रवाफ देखाउँछन्। कोही चाहिँ खल्तीको मोटाइका आधारमा पिरती लाउँछन्। मायाप्रेममा जति पैसाको खेल अन्य काममा कमै होला आजकल। पैसाका लागि १६ वर्षकी किशोरीले ६० वर्षको हजुरबालाई ब्वाईफ्रेन्ड बनाएको उदाहरण छरपष्ट भेटिन्छन्। स्कुल पढ्ने फुच्चेले दर्जनौँ केटीलाई गर्लफ्रेन्ड बनाउनुको कारण पनि पैसो नै हो। 'धेरै वटीलाई पट्यायो भने पालैपिलो खर्चपानी जुटाइदिन्छन्,' १७ वर्षीय प्रसिस रानाले अनुभव साटे, 'कहिले एउटीसँग माग्यो, कहिले अर्कीसँग। आफू त जहिले पनि मालामाल!'
हेराल्ड कलेजका अमितले भनेझैँ पैसा अहिले अक्सिजनभन्दा 'महŒवपूर्ण' भएको छ। पैसाका लागि आफैँलाई बेच्न पनि तयार छन् मान्छेहरू। हिजोआज 'सेक्रेट सेक्स' भन्ने धन्दा निकै फस्टाएको हल्ला छ। पैसाका लागि अभिभावकसँग गुहार माग्न दिक्क भएका केही युवतीले सुन्धारा, ठमेल, बसपार्क र दरबारमार्गका डान्स बारमा जागिर खाने गरेको भेटियो। सिम्रन नामकी युवतीले नर्सिङ पढ्न छोडेर सुन्धाराको एउटा डान्स बारमा नाइट ड्युटी गर्न थालेको बताइन्। 'नर्स बन्छु भनेर काठमाडौँ आएकी थिएँ,' उनले भनिन्, 'दुई वर्ष ट्राई पनि गरेँ। तर, नाम निकाल्नै सकिनँ। अरू जागिर पनि कतै पाइनँ। के गर्ने भनेर टेन्सन भएको बेला मेरो एक्स–ब्वाईफ्रेन्डले काम भनेको सबै बराबर हुन्छ भन्दै यो धन्दामा लगाइदियो। एक वर्ष भइसक्यो नाचेको नाच्यै छु।'
हिजोआज सेल्फ–डिपेन्डेन्स अर्थात् आत्मनिर्भरताको पनि कुरा उठ्ने गरेको छ। युवायुवती यसै पनि अरूको खटनपटनमा बस्न रुचाउँदैनन्। स्वतन्त्रताको सबैभन्दा बढी खोजीनिती हुने उमेर नै युवा उमेर हो भन्दा फरक पर्दैन। पैसा र स्वतन्त्रता पाए युवावस्था झकास हुने धेरैको अनुमान छ। त्यसैले पनि हिजोआज युवायुवती पढाइ र जागिरलाई सँगसँगै लग्न खोज्छन्। कतिले त पढ्ने भनेकै जागिर खान हो भन्दै पढाइ नै छाडिदिएका छन्।
'जागिर खाएपछि फ्रिडम हुन्छ,' कुमारी सेभिङ एन्ड त्रे्कडिट फाइनान्सकी कर्मचारी दुर्गा धितालले भन्छिन्, 'पैसा कमाइन्छ। त्यसपछि त जे गरे पनि भयो।' कक्षा १२ मा पढ्ने उनी दिनमा दुई सय रुपैयाँ खर्च गर्छिन्। 'मेरो ब्वाईफ्रेन्ड जापानमा छ,' उनले भनिन्, 'उसँग स्काइप वा फोनमा कुरा गरिरहनुपर्छ। त्यसमै बढी खर्च हुन्छ।'
'पैसा के हो?' हामीले युवा–विचार बुझ्न चाह्यौँ। धेरैले साझा जवाफ दिए– 'मनी इज एभि्रथिङ अर्थात् पैसा सबथोक हो।'
पैसा (धन) लाई हातको मैला ठान्ने महाकविको विचार उनका पनाति पुस्ताले पत्याउन छोडेका छन्। 'लक्ष्मीप्रसादको पालामा हातको मैला थियो होला,' रत्नराज्य क्याम्पसमा स्नातक दोस्रो वर्षमा अध्ययनरत ऋतु महर्जनले भनिन्, 'अहिले त हातको मैला होइन, नाक, कान, घाँटी, आँखा, खुट्टा, नाडीदेखि जिउभरिकै गहना हो पैसा।'
(अम्मर जिसी र अञ्जान स्वीकृतिको सहयोगमा)
हलिउड अभिनेत्रीका ‘भव्य' यौनजीवन
एन्जेलिना जोलीहलिउड अभिनेत्री एन्जेलिना जोलीको यौनजीवन विवादित खालको छ। उनी पुरुष र महिला दुवैसँग सेक्समा लीन हुने ‘बाइसेक्सुअल' भएको चर्चा हलिउड वृत्तमा चर्को छ। जोलीले समेत एक अवसरमा कुनै समय...
अघिल्लो वर्ष 'शुक्रवार सुन्दरी'का लागि कामुक अदासहितको तस्बिर खिचाएर चर्चामा आएकी जया ओझा यही शुक्रवारदेखि 'स्त्रि्कप्ट सुन्दरी'का रूपमा देखिने भएकी छिन्। शुक्रवारदेखि नेपाल टेलिभिजनमा प्रसारण हुन लागेको टेलिसिरियल 'परिबन्द'को स्त्रि्कप्ट...
व्यंग्य : सडक महोत्सव
–ईश्वर दाहाल 'सिन्धुले' असार मसान्त नजिकिन थालेपछि हाम्रो देशमा सडक महोत्सव सुरु हुन्छ। असारमा धान महोत्सवले भन्दा सडक महोत्सवले चर्चा पाउनु हाम्रो देशको सनातनी नियम हो। सडक महोत्सवलाई लिएर धेरै विरोधका...
सेतो पर्दा : नामको रोलक्रम
फिल्मसम्बन्धी विद्वता छाँट्ने निर्माता, निर्देशक तथा कलाकारको जमात दिनहुँ बाक्लिँदै छ। पूरा संसार आफैँले धानेजसरी गफ दिन्छन् उनीहरू। जब कि धेरैजसोले फिल्मको सुरुवातमा देखाइने 'ओपनिङ क्रेडिट' कस्तो हुनुपर्छ भन्ने नै...